Vaovao - Ny tontolon'ny fingotra kôlorina ao amin'ny atidohanao
Ny tontolon'ny fingotra kôlorina ao amin'ny atidohanao
Ny rubber vita amin'ny kôlômbra dia manondro ny vokatra vita amin'ny kôlôlônanina amin'ny fingotra voajanahary. Fifangaroan'ny trichloride sy tetrachloride miaraka amin'ny atin'ny klôro 65%. Ny rubber vita amin'ny kôlômbra dia manana fifandanjana tsara miaraka amin'ny resins alkyd miaraka amn'ny fahamendrehana sy ny polarity ambany. Amin'ny ankapobeny, ny resins alkyd misy asidra matavy mihoatra ny 54% dia manana fifandanjana tsara kokoa amin'ny rubber vita amin'ny klorinina ao anaty diloentsan'ny hidrokarôma manitra. Taorian'ny fampidirana ny fingotra vita amin'ny klôro dia afaka manatsara ny hamafiny, ny firaiketam-po, ny fanoherana ny solika, ny fanoherana ny asidra sy ny alkaly, ny fanoheran'ny rano, ny fanoherana ny famafazana sira, ny fanoherana ny abrasion sns sns ary hampiakarana ny taha maina amin'ilay sarimihetsika ary hampihena ny firaikinan'ny vovoka. Ampiasaina matetika ho toy ny loko vita amin'ny gorodona, loko milomano ary marika fanamarihana ny arabe.
Fampiasana «rubber» vita kôlorinina
Ny rubber vita amin'ny kôlômbra dia zara raha ampiasaina amin'ny vokatra extruded na bobongolo.
Ny fampiasana izany dia miankina amin'ny maodely isan-karazany miaraka amin'ny haben'ny molekiola na viscosity. Izy io dia mety amin'ny inks, coatings ary adhesives, sns. Amin'ny ankapobeny, viscosity ambany (0,01Pa • s) Ny rubber vita amin'ny chlorine dia ampiasaina indrindra ho toy ny additives ink; viscosity somary antonony (0,01 ～ 0,03Pa • s) vita amin'ny kôlôsy voasarimakirana no ampiasaina matetika hanaovana firakotra; viscosity avo lenta (0,1t ～ 0.3Pa • s) vita amin'ny kôlôsy voahosotra no tena ampiasaina hanamboarana adhesives, ny ankamaroany, ny rubber vita amin'ny kôlesterôla miharo viscosity ho an'ny firakotra dia ampiasaina bebe kokoa. Ny faritra fampiharana lehibe indrindra amin'ny coatings dia ny loko manamarika ny arabe, loko an-dranomasina, loko fitoeram-bokatra, loko maritrano, loko loko pisininano, loko tsy mahazaka afo, sns.
Ny loko manamarika ny arabe, dia karazana sehatr'asa fampiharana manokana an'ny fingotra vita amin'ny kôlorinina. Ny palitao miorina amin'ny fingotra vita amin'ny kôlorinina dia mahatohitra abrasion, maina haingana ary manintona ny saina amin'ny lalana vita amin'ny beton sy asfalta. Manana fananana miraikitra tsara izy ireo ary mahazaka ny vokatry ny akora simika sy ny abrasives ampiasaina amin'ny toetr'andro feno lanezy sy ny ranomandry manify amin'ny tany. Any Angletera dia voalaza fa tsy maintsy ampiasaina ny fingotra vita amin'ny klôlorina hanamarihana ireo seranam-piaramanidina.
Ankoatr'izay, noho ny habetsahan'ny klôroina avo dia tsy ho may ny fingotra vita amin'ny klôlorina. Noho izany dia fitaovana manta sarobidy izy io amin'ny fanaovana loko fandoroana afo sy fanoherana harafesina. Ity loko ity dia be mpampiasa amin'ny famolavolana solika. Ny fingotra kôlorinina amin'ny ankapobeny dia tsy ampiasaina ho toy ny maso ivoho mpanangana horonantsary, fa toy ny aditif novaina. Nampiasaina hanatsarana ny zava-bitan'ny fingotra klôroôlônina, fingotra nitrile ary adiresy polyurethane. Ny fanovana amin'ny fingotra vita amin'ny kôlorinina dia mety hahatonga ireo adhesives ireo hahay kokoa. Ny fingotra vita amin'ny kôlorinina amerikana dia ampiasaina amin'ny firakotra. Ny marika manamarika ny làlana dia 46%. Hafa ny firenena hafa. 60% ny loko vita amin'ny kôlômbra vita amin'ny klôro no ampiasaina amin'ny loko an-dranomasina. Ny fingotra vita amin'ny kôlômbra dia ampiasaina indrindra amin'ny loko an-dranomasina, loko manamarika arabe, loko misy fitoeran-javatra, fametahana ranomainty, fonosana tanky ivelany, firakofan'ny aritrano ary dity any Shina.
Ny toetra mampiavaka ny fehin-kôleô
Ny fingotra vita amin'ny kôlesterôla dia manana ny toetran'ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny asidra, ny fanoherana ny alkali, ny fanoheran'ny ranomasina, ny tsy fahamaizana, sns. Ny adhesive namboarina miaraka aminy dia azo ampiasaina amin'ny fampiraisana ny fingotra sy vy, hoditra, hazo, lamba, sns. ampiasaina ho mpanova hanovana ny rubber chloroprene hanatsarana ny tanjaka mifamatotra, ny hafanana ambony ary ny fananana hafa. Satria mihatsara kokoa ny herin'ny cohesive an'ny sarimihetsika neoprene adhesive, dia mihamitombo ny fampisehoana fifamatorana. Ny fametahana ny PVC mafy dia avo 10 heny noho ny an'ny adhesive neoprene tsy novaina.